Tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis : « Maro ireo ben’ny Tanàna tsy nanao fanambaram-pananana” | NewsMada
Tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis : « Maro ireo ben’ny Tanàna tsy nanao fanambaram-pananana”
Nivahiny tao amin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny onjampeo Alliance 92.00 ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, omaly. Anisan’ny nasongadiny tamin’izany ny momba ireo tsy mbola nanao fanambaram-pananana sy ny fananganana rafi-pitsarana hiady amin’ny kolikoly. Ampahan’ny resadresaka.
Anisan’ny nambarany ny momba fanambaram-pananan’ireo tokony hanao izany. Notsiahiviny anefa fa tsy mpamoritra hatrany akory ny Bianco. Nanteriny fa misy lafiny fanabeazana ao ka itaizana ny tompon’andraikitra amin’ny fangaraharana sy ny tamberin’andraikitra. “Tsy tokony hisy izany taratasy fampahatsiavana izany. Tokony hatao an-kitsim-po ny fanambaram-pananana… 60% mahery ireo nahavita hatramin’ny aogositra teo. Efa nandika lalàna kosa ireo tsy nahavita izany, araka ny fe-potoana voalaza ka tsy azo iadian-kevitra intsony. Manamarina sy mitondra ny taratasy eny amin’ny fitsarana izahay izao ka anjaran’ny any ny mampihatra ny lalàna… Maro anisa amin’ireo tsy nahavita izany ny ben’ny Tanàna”, hoy ihany ny Bianco. Notsindriny fa miezaka manao fanentanana hatrany izy ireo.
Niaiky kosa ny tenany fa nahitana lesoka ny momba ny fitsarana teo aloha ka nitadiavana vahaolana. “Hatsangana ny rafi-pitsarana iray misy ireo mpitsara mpanenjika sy mpamoaka didy, manana sata manokana mitovy amin’ny eo amin’ny Bianco eo amin’ny fahaleovantena na eo amin’ny fahafahana miasa… Hisy mpitsara ho voafantina manokana noho ny fahaizany, ny toetsainy, ny fahamarinanany. Homena fiofanana manokana hanao fanenjehana momba ny kolikoly izy ireo”, hoy izy.
Fitsarana manokana hiady amin’ny kolikoly
Nanteriny anefa fa na ao anatin’ny minisiteran’ny Fitsarana aza izany, hisy komity manokana hanara-maso ny fomba fiasany ary tsy hisy baiko hitsontsorika avy any amin’ny minisitera na koa olon-kafa. Tsy vitan’izany fa homena ny enti-manana izy ireo. “Ilaina izany raha te hahomby amin’ny ady amin’ny kolikoly isika. Tsy hitovy amin’ny fomba fiasan’ny fitsarana teo aloha, tsy ampy fiarovana loatra izy io ka lasa malemy ilay rafitra. Tsy nahomby koa ny vokatra avoakany. Mino aho fa hisy fivoarany satria hohatsaraina izany izao”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, niaiky ny tenany fa mahamenatra tokoa raha hametrahana fifanarahana fiaraha-miasa avokoa ny fanadinam-panjakana vao afaka manao asa sy fifaninanana madio isika. “Heverina fa miantoka ny fahadiovan’ny fanadinana ireny… Tokony hotohizana anefa na tsy foana 100% aza. Nihena kosa anefa ny kolikoly ary miroso ho amin’ny fahatsarana hatrany isika. Maro ny fitarainana teo aloha azonay fony tsy mbola nisy ny fifanarahana fiaraha-miasa tahaka ireny…”, hoy ny Bianco.
Une réponse à "Tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis : « Maro ireo ben’ny Tanàna tsy nanao fanambaram-pananana”"
Mary 07/10/2017 à 09:59
Tena dezaka no andalovan’ty Madagasikarantsika ity. Vitsy olonkendry sy sy tena vonona hiaro azy ty tanindrazantsika ty.Mijery midina ny mason’Andriamanitra.